Nagu saabsan US - Monkking Factory
guriga / Nagu saabsan
Warshadda 'Monkking' waxay dabooshaa aag qiyaastii ah 35 hektar, iyadoo sagxadda fadhiga ay qaadaneyso qiyaastii 30,000 mitir murabac ah.
Waxaan ku takhasusay Jaakadaha naqshadaynta & wax soosaarka oo leh noocyada Monkking iyo noocyada OEM in ka badan khibrad 27years ah. Warshadeena waxaa la aasaasay sanadkii 1993, magaalo xeebeed ku taal Fujian, Shiinaha, oo ku raaxeysata sumcadda "Magaalada Bacaha & Kiisaska". Xarunteena Xarunta oo ku taal Magaalada Xiamen iyo warshadda ku taal Magaalada Quanzhou. Monkking waxay ujeedkeedu ahayd Midaynta iyo Ku-dadaalidda Wax-soo-saarka, si ay u siiso macaamiisha adeegyada iyo wax soo saarka ugu wanaagsan.
Alaab-qeybiyahaaga lagu kalsoon yahay, doorashadaada ugufiican!
Waxaa naga go'an in aan bixinno adeegga ugu xirfadda badan iyo wax soo saarka ugu hal-abuurka badan dhammaan macaamiisha gudaha iyo shisheeyaha. Isla mar ahaantaana, waxaan ku dadaalnaa inaan ka caawinno shaqaalaheenna sidii loo abuuri lahaa jawi shaqo bulsheed oo caafimaad, badbaado leh, raaxo leh iyo hal abuur badan.Waxaan dooneynaa dadkeennu inay noqdaan kuwa jecel shucuurtooda waxay maalin kasta qabtaan, iyo inay horumariyaan dadka leh saamaynta wanaagsan noloshooda iyo ka shaqaynta deegaanadooda. Waxaan sidoo kale dooneynaa inaan la shaqeyno wada-hawlgalayaasha caalamiga ah si aan u baranno una baarinno Mashaariicda cusub, aan u helno xalka iyo inaan la kulanno dhammaan caqabadaha cusub.
GANACSIGA INAGU SAMEEYA
Kooxda Monkking R & D waxay ku dadaalayaan inay hal-abuuraan oo ay horumariyaan nashqadaha wax-soo-saarka 35new ee cusub bishiiba si loo buuxiyo shuruudaha iibka macaamiisha.
Dabaqyada aqoon isweydaarsiga ayaa si fiican u qalabeysan in ka badan 200 shaqaale xirfad leh, 8 khadadka wax soo saarka, 200 nooc oo mashiinnada tolmada ah. Awood ahaan - 100,000pcs boorsooyin adag ama 200,000pcs boorsooyin fudud bil kasta.
Hadafkeenu waa inaan gaarno istiraatiijiyad guuleysata: si aan uga caawino la-hawlgalayaashayada inay gaaraan natiijooyin ganacsi oo faa'iido leh, isla mar ahaantaana waxaan hubinnaa shaqaalaha nolol deggan iyo jawi bulsho oo waara.
Warshada Monkking waxay leedahay khibrad 27years ah oo ku jirta berrinka, hadda waxaan aad ugu xeel dheer nahay qaabeynta, horumarinta iyo soosaarida bacda noocyo kala duwan.
Ganacsi nala sameynta, waa Xulashadaada saxda ah!
Nooceena ah "MONKKING", Kaas oo ka diiwaan gashan 22 dal oo dibada ah, waxaanna ka dhignay xafiisyo suuq geyn ah labada magaalo ee Moscow, Russia iyo Xiamen, Shiinaha, waxay ku naaloonaysaa caan ka noqoshada aduunka oo dhan.
In ka badan 27 sano oo waayo-aragnimo ah, waxaan qaabeynay oo soosaarnay noocyo kala duwan oo Boorsooyin ah, sida Boorsada, Bacda Dibedda, Bacda Duffel, Garabka / Bacda Messenger, Shandad / Laptop Sleeve, iyo kuwo kale. Markii alaabta ceeriin ay soo gaaraan Warehouse, iyo ka hor inta aan la bilaabin wax soo saarka, Our IQC wuxuu sameyn doonaa tijaabada dharka iyo hubinta astaanta daabacaadda ee silkscreen iyo astaanta daabacaadda, iwm. Tolmada ka dib, QC waxay sameyn doontaa baaris tayo leh oo ku jirta bac kasta waxayna hubin doontaa in dhammaan boorsooyinka ay sax yihiin ka hor inta aysan xirxirin. Shirkadeena waxay sii wadaa inay soosaarto waxsoosaarka isla markaana ay balaadhiso awooda wax soosaarka, hada, waxaan dhisnay iskaashi istiraatiiji ah oo leh noocyo badan oo kuyaala aaladaha ODM.
KOOXDA ISKU DARKA DIIWAANGELINTA MACAAMIISHA
Adeeggeennu ma aha oo keliya aqoonsiga macaamiisha, laakiin sidoo kale ku-tiirsanaanta guusha macaamilka. Waxaan had iyo jeer u hoggaansanahay mabaadi'da "Iimaanka Wanaagsan, Tayada, Maareynta Sayniska", oo waxaan ku adkeysaneynaa "Tayada Koowaad". Ka go'an inaad noqoto shirkad horseed u ah warshadaha, si aad u abuurto sumcad gudaha iyo caalami ah oo xoog leh.
Waxaan noqon doonnaa Xulashadaada ugufiican iyo alaab-bixiye lagu kalsoon yahay oo Shiinaha ah.